Ukuza nengqondo okanye ukuqiqamba kwengqondo njengesixhobo sokwenza iiprojekthi zemizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isixhobo sokufaka iingqondo okanye ukubetha kwengqondo njengenkqubo yokuphuhlisa iiprojekthi ezibonakalayo
UPablo Gondar | | Ihlaziywe 17/04/2018 17:54 | Amaqhinga, Ezahlukeneyo
Ngexesha elithile okanye elinye, Bonke oochwephesha bokuyila bafika ubukho obungenanto obusishiya sifutshane ngezimvo, ukuzisa intlango ebonakalayo xa uqhuba iprojekthi. Ngesi sizathu i isixhobo sokucinga okanye ukuqiqa ngamacebo obuchule njengenkqubo yokuphuhlisa iiprojekthi ezibonakalayo Kukulungele ukuvula ingqondo kwaye usincede senze iiprojekthi, usinceda phuma kuloo pothole yoyilo y ukuvelisa izimvo ezintsha.
Esi sixhobo siza kusivumela Vula ingqondo kwaye ubeke ecaleni lonke uloyiko xa ukhupha umbono kuba kule nkqubo (ubuncinci ekuqaleni) lonke uluvo lulungile ngaphandle kwesidingo sokuseka isigwebo sexabiso kuso kwangoko. Lungisa usiba, imibala emininzi, ibhodi emnyama, iqela labantu elifuna ukukhwaza izimvo zingayeki kwaye liqale ukuvelisa izimvo ngokulandela ezinye iingcebiso malunga nendlela yokusebenzisa esi sixhobo.
Into yokuqala ekufuneka siyicacisile malunga nokwenza i Ukucinga: "nantoni na enokwenzeka", lonke uluvo lulungile nokuba lusenokubonakala ngathi luyaphambana ekuqaleni. Ngale nto icacileyo, sinokuqala ukusebenza ngaphandle kwengxaki. Kuyacetyiswa cwangcisa iqela nabantu bobudala obahlukeneyo kunye nobuchwephesha okoko lo mahluko uza kuphumelela iziphumo ezibanzi. Maxesha amaninzi ezona zimvo zilula zezona zisebenzayo kwaye ubeke bucala yonke indawo ebonelelwe kwangaphambili kuluncedo kakhulu kwezi meko.
Kuyacetyiswa ukuba usebenzise isikhuthazo esibonakalayo Indawo yokudibanisa yandisa ingqondo kancinane ngakumbiNgale nto sinokusebenza kwimeko-bume ethandekayo efanelekileyo kuthi, sibeka bucala umbono wokusebenza kwigunjana elivaliweyo kancinci. Uncedo olubonakalayo noluncedo kwaye kulula xa uvelisa izimvo, ngu nxiba izitikha okanye kukaMantashe ngemibala emininzi ukuze ukwazi ukuzoba, ukuhlela umxholo, ukucwangcisa izikimu kunye nazo zonke iintlobo zemizobo yeprojekthi yethu.
Siphakame, sijikeleze igumbi kancinci, sicinge ngokwethu imizuzwana embalwa, emva koko siqale khulula ingqondo.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngala:
Yiba nenjongo yokufezekisa.
Yitsho zonke iintlobo zezimvo, nokuba zibonakala ngathi ziyaphambana.
Iingcamango zecandelo ekupheleni.
Hlala nombono wokugqibela.
Ukuqala kufuneka sazi ukuba sikhangela ntoni kwaye yintoni esifuna ukuyiphumeza ngolu luvo. Kule nxalenye sithatha isigqibo ngesihloko ukubamba iingcinga malunga injongo ukuvelisa konke ukuhamba kweempendulo ukuya esiphelweni esinye. Umzekelo, masithi sineshishini lomrhumo kwaye sijonge umbono onomtsalane wokuzibandakanya ngokufanelekileyo nomsebenzisi kunye nokwenza ukuthengisa ngakumbi. Ngalesi siseko sokuqala singenza isikimu esincinci ngale ndlela (ngezantsi kwefoto).
Icandelo: Ivenkile yeDonut
Injongo: kutsala abathengi
Ukuqiqa: phuma, nxiba njengadonathi, nika idonati, fihla iidonati kufutshane nendawo, udlale imidlalo nabasebenzisi
Lo ingangumzekelo wesikimu esincinci sengqondo esimele sikwenze xa sisebenza sisebenzisa ukuqina kwengqondo: cinga ngesihloko, injongo kwaye uyeke ingqondo.
Nje ukuba sazi ukuba yeyiphi isihloko esiza kujongana nayo kwaye zeziphi iinjongo esizifunayo, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqala imibono ekhuphayo "ngathi iphambene". Umxholo wexesha lesi sixhobo uyahluka ngokuxhomekeke kwinjongo kwaye unokuba lixesha elifutshane (imizuzu eli-10) okanye uluhlu olubanzi lwexesha (iyure enye). Ngokwenyani akukho xesha lichazwe kwangaphambili kunokuba, umsebenzisi ngamnye uyenza ngesantya sakhe. Ukuba kuyinyani ukuba sinokuzinyanzela ukuba siphuhlise uvavanyo ngokumakisha ixesha lokuphepha ukucinga kakhulu ngombono ofanayo kwaye sizivumele ukuba sihambe ngakumbi xa sicinga. Enye indlela yokuvumela ingqondo yakho igeleze yile misela ubuncinci bezimvo ukusinyanzela ukuba sicinge ngcono.
Emva kokukhupha zonke iintlobo "zempambano okanye hayi" izimvo esiye saya kuzo icandelo kwaye ukhether Zonke ezo zinokuba luncedo kuthi.
Umzekelo, sibuyela kwimeko yedonathi kwaye sicinge ngesiphumo sezinye zeembono ezivele kuloo nto zintocuk.
izimvo: Nxiba kwisitrato seedonuts ukutsala uluntu, unike idonati esitratweni nemeko yokutyelela ivenkile, wenze idonut enkulu, udlale imidlalo esitalatweni, usebenzise amanethiwekhi onxibelelwano. -Lezi ziyakuba zonke izimvo eziveliswe kolu bungqina-
Kuzo zonke izimvo, siza kuzisebenzisa (icandelo) enye yazo kodwa siza kuyidibanisa nezinye izimvo.
Umbono okhethiweyo: Yenza idonut enkulu
Izimvo ezidibeneyo: Ukudlala imidlalo esitratweni, usebenzisa iinethiwekhi zokunxibelelana.
Ngale nkqubo incinci apho sele sichaze uthotho lwamanqaku ekufuneka siwalandele, sinokuqala ukucacisa into esifuna ukuyenza kwaye zeziphi izinto ezibalulekileyo kuthi. Inyathelo elilandelayo iya kuba kukuqhubela phambili ukwahlula ezo ngcinga kunye nokucokisa a «Superideamegaguayfinal» (Kufuneka sihlale sizixabisile izimvo zethu) ukuze sikwazi ukwenza oko ngomzobo, umzobo, isicatshulwa okanye nayiphi na enye indlela eyenzekayo kuthi.
Kule meko siza kuthi Chaza umbono ukuyichaza nje ngombhalo:
«Superideamegaguayfinal kwinkampani yedonut»: Sifuna ukutsala uluntu, siphucule ukuthengisa, senze inkampani yethu yaziwe ngcono kwaye isebenzise ngakumbi iinethiwekhi zentlalo. Singakufezekisa konke oku ukuba senza i-donut enkulu embindini wesitrato (umbono okhethiweyo) apho sikhuthaza abantu ukuba bathathe inxaxheba ngokwenza uhlobo lomdlalo wokudibana (umbono odibeneyo 1), ngaloo ndlela sifumana izinto ezinomtsalane kuthungelwano lwethu lwentlalo ( umbono odityanisiweyo 3).
Sihambile ekubeni singabinanto sineqela elinokubakho lezimvo kunye nolungelelwaniso olunokwenzeka kumsebenzisi sisebenzisa kuphela ingqondo yethu kwaye sizimisele ukulahla izimvo.
Kuyacetyiswa ukuba kuvezwe izimvo esidlangalaleni kwiqela labantu ngeyona ndlela inomdla kakhulu: yeqonga, umzobo, imizobo ... njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Isixhobo sokufaka iingqondo okanye ukubetha kwengqondo njengenkqubo yokuphuhlisa iiprojekthi ezibonakalayo